အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၌ ကဘူးလ်မြို့အား တာလီဘန်တို့က ထိန်းချုပ်ပြီးနောက် IS တိုက်ခိုက်မှုများ ပြန်လည်မြင့်တက်လာ - Xinhua News Agency
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့၌ ဩဂုတ် ၃၀ ရက်တွင် ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်ခံရပြီးနောက် ပျက်စီးသွားသည့် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကဘူးလ် ၊ ဩဂုတ် ၃၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
စစ်ပွဲကြောင့် အထိနာနေသည့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၌ နှစ်ပေါင်းများစွာ အသံတိတ်နေခဲ့သည့် အိုင်အက်စ်(IS)အဖွဲ့သည် ဩဂုတ် ၂၆ ရက်က အကာအကွယ်အပြည့်ယူထားသည့် ကဘူးလ်လေဆိပ်အား အကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု စတင်ပြုလုပ်ပြီး အာဖဂန်နိုင်ငံသား ၁၇၀ ဦးထက်မနည်း နှင့် အမေရိကန် စစ်သား ၁၃ ဦး သေဆုံးကာ အခြားသူ ၂၀၀ ခန့် ဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့ရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံ၌ ဩဂုတ် ၂၇ ရက်တွင် ကဘူးလ်လေဆိပ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ဒဏ်ရာရသူများ ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ အိုင်အက်စ်(IS)အဖွဲ့၏ လက်အောက်ခံ ပြည်တွင်းအစ္စလာမ်မစ်အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သော ISIS-K ၏ တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် အများက အံ့ဩသင့်ခဲ့ရပြီး အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံမှ အမေရိကန်ဦးဆောင်သည့် တပ်ဖွဲ့များ ရုတ်သိမ်းပြီးနောက်တွင် ၎င်းတို့အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သတိပေးခဲ့သည်။
ကဘူးလ်လေဆိပ်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကို လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ယင်းတိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်သော အကြမ်းဖက်အုပ်စု ပုန်းခိုရာ နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း နန်ဂါဟာပြည်နယ်ကို အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့က ဒရုန်းဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယင်းလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အကြမ်းဖက်အုပ်စု အဓိကကြိုးကိုင်သူ တစ်ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
နန်ဂါဟာပြည်နယ်တွင် အမေရိကန်၏ မောင်းသူမဲ့ဒရုန်း တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အရပ်သား နှစ်ဦး သေဆုံးပြီး ကလေးငယ် နှစ်ဦးအပါအဝင် လူ လေးဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း တာလီဘန် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Zabihullah Mujahid က အတည်ပြုခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၌ အိုင်အက်စ်(IS) ပုန်းအောင်းရာနေရာဟု စွပ်စွဲထားသည့် နေရာအား တိုက်ခိုက်မှုသည် ဒိုဟာမြို့၌ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် အမေရိကန်-တာလီဘန် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း တာလီဘန်ဖက်က သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
“အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းမှာ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုက ဒိုဟာသဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်တာ ဖြစ်ပြီးတော့ အမေရိကန်အနေနဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမြေပေါ်မှာ စစ်ဆင်ရေးတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ အခွင့်အရေး မရှိပါဘူး။”ဟု တာလီဘန် အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ Abdul Haq Waseq ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဒေသတွင်းမီဒီယာ တစ်ခုဖြစ်သည့် Tolo News က ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
တာလီဘန် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Zabihullah Mujahid ကလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမပြုလုပ်မီ ယင်းစစ်ဆင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ကို အသိပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကဘူးလ်မြို့သည် မကြာသေးမီရက်များအတွင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှ
ုများ ပိုမိုကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်ဦးဆောင်သည့် တပ်ဖွဲ့များ ကယ်ဆယ်ပြောင်းရွှေ့ရေး ပြုလုပ်နေသည့် အာဖဂန်နိုင်ငံက ကဘူးလ်လေဆိပ်၌ ဩဂုတ် ၃၀ ရက် အစောပိုင်းတွင် ဒုံးကျည် ငါးစင်း ပစ်ခတ်ခံရကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
” Khair Khana Minia ဒေသကနေ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးပေါ်တပ်ဆင်ထားသည့် ဒုံးကျည်တွေကို လေဆိပ်ဆီ ဦးတည်ပစ်လွှတ်ခဲ့တာပါ။ အမေရိကန် ဒုံးကျည်စနစ်က အဲဒီဒုံးကျည်တွေကို ကြားဖြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။”ဟု မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ Sayyad Mohammad က ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည် ဩဂုတ် ၂၉ ရက်မှစ၍ ကဘူးလ်မြို့ပေါ်တွင် ပျံသန်းလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံအတွင်း အိုင်အက်စ်(IS) တိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည် ၎င်းတို့တည်ရှိမှုကို သက်သေပြရန် လာမည့်ရက်များ သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပတ်များတွင် တိုက်ခိုက်မှုများ ထပ်မံပြုလုပ်လာမည်ကို အာဖဂန်ပြည်သူများ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိ သည်။
ISIS-K အဖွဲ့သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၌ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
KABUL, Aug. 30 (Xinhua) — After years of being silenced in the war-battered Afghanistan, the Islamic State (IS) group launchedadeadly attack on the fortified Kabul airport Thursday, leaving at least 170 Afghans and 13 U.S. soldiers dead and about 200 others wounded.
The attack on the Kabul airport has been faced by the U.S. military’s sharp reaction as it launched drone strikes in the eastern Nangarhar province, killing an alleged attack planner of the terror group.
“The airstrike inside Afghanistan isaviolation of Doha agreement and America does not have the right to conduct operations in Afghanistan soil,”aTaliban senior leader Abdul Haq Waseq was quoted byalocal media outlet Tolo News as saying.
“The rockets attached toasedan were fired towards the airport from Khair Khana Minia locality. It looked to me that the U.S. missile system intercepted the rockets,” witness Sayyad Mohammad told Xinhua.
The ISIS-K emerged in Afghanistan in 2015. Enditem
Photo 1 – Photo taken on Aug. 30, 2021 showsadamaged vehicle after rockets were fired in Kabul, capital of Afghanistan. (Photo by Kabir/Xinhua)
Photo2– People injured in the Kabul airport attacks receive medical treatment atalocal hospital in Kabul, capital of Afghanistan, Aug. 27, 2021. (Photo by Saifurahman Safi/Xinhua)